प्रायः सोधिने प्रश्न । मेटलाइफ नेपाल
मेरो प्रिमियम भुक्तानी
गृह पृष्ठ सहायता सहायता केन्द्र प्रायः सोधिने प्रश्नहरु
मेटलाइफमा हामीले प्रदान गरिरहेको सेवाहरुका बारेमा तपाईं जानकार हुनु जरुरी छ । हामीले केही प्रायः सोधिने प्रश्नहरु र तिन्का जवाफहरुलाई तपाईंको सहयोगको लागि तल एकसाथ प्रस्तुत गरेका छौं ।
मैले अझ धेरै जान्न चाहेको विषय
कृपया, एउटा विषय छान्नुुहोस् मेटलाइफको बारेमा जीवन बीमा दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा के म बीमको लागि योग्य छु ? के मैले बीमा खर्च भर्न सक्छु ? मैले मेरो पोलिसी कसरी व्यवस्था गर्नु पर्छ ? मैले दावी कसरी गर्नु पर्छ ? कर्मचारी लाभहरु–ग्रुप बीमा
मेटलाइफलाई केले भिन्न बनाउँछ ? मैले यसैलाई किन रोज्नु पर्छ ?
हामीले वर्षैादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विविधिकरणमार्फत् सँगाल्दै आएको बृहत अनुभवले हामीलाई अरुभन्दा भिन्न राखेको छ । ग्राहकहरुको आवश्यकता, विश्वव्यापी प्रचलन एवं बजारको अवस्थालाई बुझेर तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै हाम्रो कारोबारको मुटु हो । हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई उपयुक्त हुने व्यक्तिगत रुपमा र रोजगारदाताका च्यानलहरुसँग सम्बद्ध विभिन्न बीमा उत्पादनहरु हाम्रो सेवा संचालित प्रत्येक क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं ।
योसँगैं विश्वसनीय मेडिकल सेवा प्रदायकहरु, व्यवस्थित हेरचाह सुविधाहरु र अविच्छिन्न ग्राहकहरु केन्द्रित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हाम्रो सञ्जाल नै हो, जसले हामीलाई अरुभन्दा भिन्न राख्दछ ।यदि तपाईं हाम्रो कोही एकजना प्रोफेसनल परामर्शदातासँग आफ्नो कुरा राखेर हामीले तपाईंको बीमा आवश्यकताको निमित्त के गर्न सक्छौं भन्ने जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भनें यहाँ(लिन्क) बाट अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुुहोस्, त्यसपछि एक व्यक्तिगत सल्लाहकारले तपाईंको अनुकूलतामा तपाईंलाई कल गर्नेछ ।
मेटलाइफले किन एलिकोलाई प्राप्त ग¥यो ?
मेटलाइफले एलिकोलाई आफूमा विलय गराउनु मेटलाइफको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारीकरणको एक रणनीतिक हिस्सा हो । यसबाट एलिकोको ५० भन्दा बढी देशहरुमा फैलिएको कार्य क्षेत्रलाई समेट्दै कम्पनीको विश्वव्यापी विस्तारमा मद्दत पुगेको छ र मेटलाइफको कारोबारलाई विश्वव्यापी रुपमा एक अग्रणी संस्थाको पहिचान दिलाएको छ । मेटलाइफ र एलिकोको कारोबारहरु उच्चरुपमा प्रशंसनीय छन् । दुवैको संयोजनले मेटलाइफको भौगोलिक एवं उत्पादन विविधतालाई विस्तारित र सन्तुलित बनाएको छ, यसैगरी मेटलाइफको वितरण क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिदिएको छ ।
यसले मेटलाइफ र एलिको ग्राहकहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?
एलिको अब मेटलाइफको एक अ· भएको छ, जुन जीउनी र कर्मचारी लाभ कार्यक्रमहरु भएको, तथा ५० भन्दा बढी देशहरुमा ९०० लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको विश्वकै एक अग्रणी बीमा सेवा प्रदायक संस्था हो । यसका सहायक प्रतिष्ठानहरु र मातहती संस्थाहरुमार्फत् मेटलाइफले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ल्याटिन अमेरिका, एशिया प्यासिफिक, युरोप र मध्य पूर्वका देशहरुमा बजारको प्रमुख हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । यस कारोबारको कारणबाट मेटलाएइफ र एलिकोका ग्राहकहरुले कुनैपनि प्रकारको व्यवधान व्यहोर्नु पर्दैन । तपाईंका पोलिसीहरु र सम्झौतानामाहरु यथावत् रुपमा नै चालु र प्रभावकारी रहन्छन् ।कृपया, आफ्नो पछिल्लो सम्पर्क जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला ताकि हामीलाई तपाईसँग समय समयमा सूचना आदान प्रदान गर्न सहज होस् ।
एलिकोको एक ग्राहक भएको नाताले के मेरो पोलिसीमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दछ ?
पर्दैन । यस कारोबारको कारणले गर्दा तपाईंको पोलिसीका लाभहरु, शर्त तथा बन्देजहरुमा कुनैपनि परिवर्तन गर्नु पर्ने छैन । तपाईंले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छैन । कभरेजको निरन्तरता सुनिश्चित् गर्न तपाईंले तपाईंको प्रिमियम भुक्तानी निरन्तर चुक्ता गरिरहनु पर्दछ र अन्यथा तपाईंको हालको व्यवस्थाका शर्तहरुको पालना गर्नुपर्दछ ।
के यो कारोबारले मेटलाइफका ग्राहकहरुलाई असर पुग्छ ?
मेटलाइफका चालु पोलिसीहरु र सम्झौताहरुमा यो कारोबारले कुनै परिवर्तन गराउँदैन । सबै पोलिसी र सम्झौता शर्तनामा र बन्देजहरु यथावत् रुपमा जारी एवं प्रभावकारी रहन्छन् ।
के यो विलयले मैले पेश गरेको कारोबार जस्तैः नयाँ पोलिसीको आवेदन, बीमा रकम बढी÷घटी, दावी माग, पोलिसी कर्जा आदिलाई कुनै किसमको असर पु¥याउँछ ?
के म अझै पनि एलिकोका उत्पादनहरु खरी द गर्न सक्छु ?
अवश्य, एलिकोका उत्पादनहरु मेटलाइफको स्वामित्वको मातहतमा निरन्तर उपलब्ध भैरहनेछन् ।
के मेरो एजेण्ट उही नै रहन्छ ? मेरो प्रचलित पोलिसीको बारेमा बुझ्नका लागि मैले कोसँग सम्पर्क राख्नु पर्छ ?
तपाईंको प्रचलित पोलिसीहरुमा कुनै प्रकारको असर पर्ने छैन । तपाईंले आफ्नो एजेण्ट वा ग्राहक सेवाबाट अन्य जिज्ञासाहरुको जवाफ पाउन सक्नु हुनेछ ।
के मैले बिल भुक्तानी गर्ने गरेको माध्यम परिवर्तन गर्नु पर्छ ?
तपाईंले प्रिमियम तिर्ने गर्नु भएको माध्यम (जुनै विधि भएपनि) तत्कालको लागि परिवर्तन गरिहाल्नु पर्दैन । तपाईंको पोलिसीका शर्तहरु यथावत् रहनेछन् र पहिलेकै स्थानमा सेवा सुचारु रहनेछ । यदि भविष्यमा कुनै परिवर्तन भएमा तपाईंलाई त्यसबारेमा तुरुन्तै र पर्याप्त अग्रीम सूचना सहित सूचित गरिनेछ । कृपया, आफ्नो पछिल्लो सम्पर्क जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला ताकि हामीलाई तपाईसँग समय समयमा सूचना आदान प्रदान गर्न सहज होस् ।
अबको दिनबाट मेरो सम्पर्क माध्यम को हुनेछ ?
तपाईंको सम्पर्क माध्यम अघि जे थियो त्यही यथावत् रहनेछ । यदि भविष्यमा कुनै परिवर्तन भएमा तपाईंलाई त्यसबारेमा तुरुन्तै सूचित गरिनेछ । यदि तपाईंको सम्पर्क जानकारी परिवर्तन भएको छ भनें कृपया हामीलाई अद्यावधिक गराउनु होला ।
के ग्राहक सेवाका टेलिफोन नम्बरहरु परिवर्तन हुन्छन् ?
तपाईंसँग हाल भैरहेको टेलिफोन नम्बरहरु नै कायम भैरहनेछन् । यदि भविष्यमा कुनै परिवर्तन भएमा तपाईंलाई त्यसबारेमा तुरुन्तै र पर्याप्त अग्रीम सूचना सहित सूचित गरिनेछ ।
म्टलाइफले प्रदान गर्ने उत्पादनहरु र सेवाहरु के के हुन्
हामीकहाँ तपाईं आइपुग्नु नै तपाईंले सही ठाऊँको आरम्भ गर्नु हो । तपाईंले अब यदि तपाईं त्यहाँ हुन सक्नु भएन भनें तपाईंलाई कभर गर्न के आवश्यक पर्दछ, त्यसको बारेमा विचार गर्नु जरुरी छ । केही व्यक्तिगत वित्तिय सूचनाहरु संकलन गर्ने अर्को विषय हुन सक्छ । के तपाईंका परिवारहरु एउटै घरमा बस्दछन् ? हरेक महिना तपाईं कतिपटक बाहिर गैरहनु पर्दछ, जो भेट्नलाई आवश्यक छ र कति समयसम्मको लागि ? के तपाईंलाई स्कूलको फी, यातायात खर्च, घरमा थप अन्य सहयोग कभर गर्न आवश्यक छ ? तर सम्झनुहोस्, तपाईंको अवस्था अत्युत्तम हुन सक्छ, यसैले तपाईको सहयोग गर्न हामीलाई उत्कृष्ट अवसर प्रदान दिनलाई संक्षिप्त फारम यहाँबाट(लिन्क) गरेर भर्न सक्नु हुन्छ र हाम्रो एकजना व्यक्तिगत सल्लाहकारले तपाईंको आवश्यकताहरु बारे छलफल गर्न तपाईंको अनुकूलतामा तपाईंलाई कल गर्नेछन् । यसको लागि कुनै शुल्क र बन्देज लाग्ने छैन । स्मरणयोग्य यो छ कि बीमा गर्न तपाईंले पहिले नै आफ्नो निर्णय गरिराख्नु भयो भने त्यो धेरै सहज र सुविधाजनक हुनेछ ।
म जीवन बीमा गर्न चाहन्छु, तर मैले कहाँ शुरु ग्र्नु पर्छ ?
कसरी म आवधिक जीवन बीमाको लागि चयन हुन्छु ?
योग्यताका शर्तहरु तपाईंले किन्न चाहनु भएको पोलिसीको प्रकृति अनुसार भिन्न हुन सक्छ । शुरु गर्नलाई, तपाईंले हाम्रो उत्पादन सेक्सनमा गई हामीकहाँ उपलब्ध विविध उत्पादनका शृँखलाहरु र ती प्रत्येकका लागि निर्धारित योग्यताको शर्त अवलोकन गर्न सक्नु हुन्छ । यसैबाट तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । तत्पश्चात्, तपाईंले हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग सम्पर्क राखेर तपाईंको निश्चित् आवश्यकताहरु पूरा गर्ने कुनै योजनाका बारेमा विचार विमर्श गर्न सक्नु हुन्छ । सबैभन्दा छिटो माध्यम सल्लाहकारसँग भेट गर्ने भनेको यहाँ क्लिक गरेर संक्षिप्त फारम भर्ने हो र हामी तपाईंलाई तपाईंको अनुकूल समयमा कल गर्नेछौंं ।
मलाई कति जति जीवन बीमा आवश्यक पर्छ होला ?
यो प्रश्नको उत्तर तपाईंको आफ्नै परिस्थितिहरुमा निर्भर गर्दछ । परिस्थितिहरु जस्तै तपाईंमा आश्रीत कति छन्, तपाईले प्रत्येक महिना कभर गर्न कति रकम तिर्नु पर्छ र सबैभन्दा मुख्य, तपाईंलाई कति कभर आवश्यक पर्छ भन्ने तपाईंको उमेरले पनि फरक पार्दछ । अतः तपाईंलाई कुन चाहिं कभर श्रेष्ठ होला भन्न सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो संक्षिप्त फारम भर्ने अनि हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारबाट कलको लागि आग्रह गर्ने नै हो । तिन्ले तपाईंसँग केही जिज्ञासाहरु राख्नेछन्, जसले तपाईंका अहिलेका आवश्यकताहरु र भविष्यमा त्यसले के हुन सक्छ भनी निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्तो सबै कुराकानी गोप्य रहनेछ र यसका लागि तपाईंलाई कुनै बन्देज वा शुल्क लाग्ने छैन । हामी तपाईंबाट थप सुन्न लालायित छौं ।
के आवधिक पोलिसीसँग कुनै नगद मूल्य छ ?
आवधिक पोलिसी भनेको जीवन बीमा हो, जस अन्तर्गत तपाईं, बीमित व्यक्तिको निधन तोकिएको सम्झौता अवधिभित्र भएमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम त्यसवापत्को एकमुष्ठ रकम तपार्ईंका लाभग्राहीहरुलाई प्रदान गरिनेछ । तपाईंले प्रिमियम चुक्ता गर्न शुरु गर्नु भएदेखि नै त्यसको प्रयोग तपाईंको सम्पूर्ण सुरक्षामा गरिनेछ, र आवधिक बीमा पोलिसीमा कुनै नगद मूल्य हुँदैन ।
जीवन बीमा विलासीता सरह देखिन्छ । म कसरी भुक्तानीहरुको बारेमा प्रष्ट हुन सक्छु जबकि मैले हेर विचार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु अरु पनि छन् ?
जीवन बीमाले तपाईंका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै तपाईंको परिवार, तपाईंको घर र तपाईंको आय सबैलाई सुरीक्षित राख्न सहयोग गर्दछ । यसैले, जीवन बीमा विलासीताभन्दा पनि आवश्यकता हो । जीवन अनिश्चित् हुन सक्छ र आइपर्न सक्ने अकल्पनीय घटनाको बारेमा सोच्न पनि सम्भव हुँदैन, अतः यो नै जान्न राम्रो हुन्छ कि अचानक आइपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न कुनै योजना छ । यदि तपाईं तपाईंलाई कभरको कुन ढाँचा उचित हुन सक्छ भनेर हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग परामर्श गर्न चाहनु हुन्छ भनें तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्न सक्नु हुन्छ र उनीहरुले तपाईंको अनुकूल समयमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछन् । तपाईंका कुनै पनि जिज्ञासाहरुको समाधान गर्न पाउँदा उनीहरु हर्षित ह’नेछन् ।
मलाई जीवन बीमा किन आवश्यक छ –किन अहिले ?
जीवन बीमाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै तपाईंको मृत्यु जस्तो अचानक आइपर्ने घटनापश्चात् तपाईंले छाडेर जानु हुने कसैलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु हो । तपाईंको बीमा रकमले तपाईंको परिवारलाई उनीहरु बस्ने घरमा राख्ने सुनिश्चित्ता प्रदान गर्दछ, जीवनयापन गर्न पर्याप्त पैसा रहनेछ तथा स्कूल फिहरु र बिलहरु आदि जस्ता खर्चहरु कभर गर्न सक्छ । जीवन बीमा एक बचतको स्वरुप पनि हुन सक्छ, जुन भविष्यमा तपाईंको काममा प्रयोग गर्न मिल्छ, जस्तैः सन्ततिको शिक्षा, छोरीको विवाह, यतिमात्र नभई तपाईंले बितेका वर्षहरुमा बिताउँदै आउनु भएको जीवन शैली स्तरलाई कायमै राख्न पनि अवकाश पश्चात्को अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्दछ । यदि तपाईं जीवन बीमाले कसरी तपाईंका निश्चित् आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् भनेर अझ बढी जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनें हाम्रो एकजना अनुभवी प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग छलफल गर्नुहोस् ।तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्न सक्नु हुन्छ र एकजना सल्लाहकारले तपाईंको अनुकूलतामा कुरा गर्न कल गर्नेछन् र यो कुराकानी अत्यन्त गोप्य रहनेछ ।
दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा
मैले स्वास्थ्य बीमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छु ?
तपाईंले हाम्रो उत्पादन सेक्सनमा गएर हामीद्वारा उपलब्ध विविध उत्पादनका शृँखला र विभिन्न पोलिसीहरुको विशेषता अवलोकन गर्न सक्नु हुन्छ । एकपटक तपाईंले आफूले चाहनु भएको उत्पादनको बारेमा निर्णय गर्नु भएपछि वा यदि तपाईंलाई सहयोगको जरुरत प¥यो भनें तपाईंले हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग सम्पर्क राखेर कुरा गर्न सक्नु हुनेछ । सबैभन्दा छिटो माध्यम सल्लाहकारसँग भेट गर्ने भनेको यहाँ क्लिक गरेर संक्षिप्त फारम भर्ने हो र हामी तपाईंलाई तपाईंको अनुकूल समयमा कल गर्नेछौंं ।
सघन रोग बीमाले कसरी काम गर्छ ?
सघन रोग बीमाले तपाईं वा तपाईंका प्रियजनलाई सूचीकृत ३१ व्टा रोगहरुमध्ये कुनै एक रोग लागेको पहिचान भएपछि सुरक्षा प्रदान गर्दछ । सघन रोग बीमाले तपाईंको पोलिसीद्वारा कभर गरिएको रोगहरुमध्ये कुनै एक रोगको पहिचान भएपछि तपाईंलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनेछ । तपाईंलाई अत्याधुनिक मेडिकल सेवासम्मको पहुँच र तपाईंको आर्थिक प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने पैसा र तपाईंको स्वतन्त्र र जीननशैली कायम गर्ने लाभ प्राप्त हुनेछ ।
यस योजनाद्वारा कभर गरिएको रोगहरुमा क्यान्सर र कोरोनरीका अवस्थाहरु ह्ुन् जसको लागि खर्चिलो उपचार र निको हुन धेरै लामो समय लाग्ने गर्दछ । तपाईंले हाम्रो उत्पादन सेक्सनमा गएर कभर गरिएका रोगहरुको सबै सूचीका साथै यस पोलिसीको लाभहरु सम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्न सक्नु हुन्छ ।
मैले अपा·ता आय संरक्षण बीमा कभरेज कति गराउनु पर्दछ ?
यो प्रश्नको उत्तर तपाईंको आफ्नै परिस्थितिहरुमा निर्भर गर्दछ । परिस्थितिहरु जस्तै तपाईंमा आश्रीत कति छन्, तपाईले प्रत्येक महिना कभर गर्न कति रकम तिर्नु पर्छ र सबैभन्दा मुख्य, तपाईंलाई कति कभर आवश्यक पर्छ भन्ने तपाईंको उमेरले पनि फरक पार्दछ । यो स्मरणमा राख्नु पर्दछ कि कुनै पनि अपा·ता आय संरक्षण योजनाले तपाईंको आम्दानीको एक हिस्सामात्र प्रतिस्थापन गर्नेछ । अतः तपाईंलाई कुन चाहिं कभर श्रेष्ठ होला भन्न सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो संक्षिप्त फारम भर्ने अनि हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारबाट कलको लागि आग्रह गर्ने नै हो । तिन्ले तपाईंसँग केही जिज्ञासाहरु राख्नेछन्, जसले तपाईंका अहिलेका आवश्यकताहरु र भविष्यमा त्यसले के हुन सक्छ भनी निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्तो सबै कुराकानी गोप्य रहनेछ र यसका लागि तपाईंलाई कुनै बन्देज वा शुल्क लाग्ने छैन । हामी तपाईंबाट थप सुन्न लालायित छौं ।
म् मेरो कम्पनीको ग्रुप मेडिकल पोलिसीबाट कभर गरिएको छु । के मैले अन्य बीमा गर्नु जरुरी छ ?
सबैभन्दा पहिले त तपाईंले कम्पनी पोलिसीले तपाईंलाई के कभर गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ । कहिलेकाँही, यसप्रकारको कभरले सामान्य आधारभूत बीमामात्र उपलब्ध गराएको हुन्छ जुन तपाईंको सबै आवश्यकताहरुका लागि अपुग हुन सक्दछ ।कति र कस्तो प्रकारको कभर तपाईंलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थितिहरुमा निर्भर रहन्छ । अतः तपाईंलाई कुन चाहिं कभर श्रेष्ठ होला भन्न सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो संक्षिप्त फारम भर्ने अनि हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारबाट कलको लागि आग्रह गर्ने नै हो । तिन्ले तपाईंसँग केही जिज्ञासाहरु राख्नेछन्, जसले तपाईंका अहिलेका आवश्यकताहरु र भविष्यमा त्यसले के हुन सक्छ भनी निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ । यस्तो सबै कुराकानी गोप्य रहनेछ र यसका लागि तपाईंलाई कुनै बन्देज वा शुल्क लाग्ने छैन । हामी तपाईंबाट थप सुन्न लालायित छौं ।
के पहिलेका विद्यमान अवस्थाहरु कभर गरिन्छन् ?
अरु धेरै बीमाकर्ताहरु झैं हाम्रो पोलिसीले पनि साधारणतया पहिलेका विद्यमान अवस्थाहरु कभर गर्दैन । तरपनि हामी तपाईंलाई हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग भेटेर आफ्नो अवस्था राख्न हुन अनुरोध गर्दछौं । तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्नुहोस् र एकजना सल्लाहकारले तपाईंको अनुकूलतामा कुरा गर्न कल गर्नेछ ।
जब म विदेश भ्रमणमा रहेको हुन्छु, के मेरो बीमा भैरहेको हुन्छ ?
हाम्रो सबै पोलिसीहरुले विश्वव्यापी रुपमा कभरेज गर्दछन् र यसैले तपाईं ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईंले विदेशमा जहाँ भ्रमण गर्नु भएपनि तपाईं कभर गरिएको हुनु हुनेछ ।
के तपाईंको पोलिसीले सबै खाले स्वास्थ्य समस्याहरु र रोगहरुको उपचार कभर गर्दछ ?
हाम्रो स्ट्याण्डर्ड ग्रुप पोलिसीले समग्र मेडिकल कभरेज गर्दछ । तथापि, सबै बीमा सेवा प्रदायकहरुले जस्तै हामीले पनि तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थितिलाई अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाईंसँग पहिलेको विद्यमान अवस्था छ, जन्मजात असामान्यता छ वा अर्कै किसिमको विशेष मेडिकल आवयक छ भनें यसले तपाईंले पाउने कभरमा प्रभाव पार्न सक्दछ । यदि यो अवस्था छ भनें तपाईंको ग्रुप पोलिसीले सधैं कभर, कुनै विशिष्ट अपवर्जनहरु र अधिकतम लाभ सीमालाई सधैं विस्तारित गर्नेछ । यदि तपाईं तपाईंको कभरबा बारेमा अनिश्चित् हुनुहुन्छ भनें तपाईंले जहिलेपनि हाम्रो एकजना सल्लाहकारसँग गोप्य रुपमा परामर्श गर्न सक्नु हुन्छ । यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्नुहोस् र हाम्रो एकजना विज्ञले तपाईंको अनुकूलतामा कुरा गर्न कल गर्नेछ ।
के मेरा सबै बालबच्चाहरुको बीमा ‘परिवार ऐच्छिक’ अन्तर्गत हुन सक्छ ?
अवश्य हामीले तपाईंका सबै बालबच्चाहरु जो ६ महिनादेखि १९ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् उनीहरु सबैको कभर हुने व्यवस्था गरेका छौं । साथसाथै तपाईंले २३ वर्षसम्मका छोराछोरीलाई पनि, यदि उनीहरु पूर्णकालिन विद्यार्थी छन् भनें आफ्नो पोलिसीमा थप गर्न सक्नु हुन्छ । ‘परिवार ऐच्छिक’ ले कसरी तपाईंको लागि काम गर्छ भनेर जान्नका लागि यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्नुहोस् र हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सलाहकारले तपाईंलाई कल गरेर तपाईंको आवश्यकताहरुमाथि परामर्श गर्नेछ ।
के म मेरो पति÷पत्नीको लागि बीमा पोलिसी शुरु गर्न सक्छु ?
सक्नु हुन्छ । हामीले तपाईं र तपाईंको परिवारलाई स्वदेशमा रहँदा वा विदेशमा कतै जाँदा पनि सुरक्षा प्रदान गर्न विविध उत्पादनहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थितिका लागि कुन प्रकारको बीमा उत्तम हुन्छ भनेर जान्न यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो संक्षिप्त अनुरोध फारम भर्नुहोस्, तपाईंसँग हाम्रो एकजना व्यक्तिगत सल्लाहकार सम्पर्कमा आउनेछ ।
यदि मैले ग्रुप बीमासँगसँगै अर्को व्यक्तिगत बीमा पनि लिएँ भनें के मलाई अन्य कुनै अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुन्छ ?
तपाईंको ग्रुप बीमा लाभहरु निर्दिष्ट हुन्छन् र यो तपाईंको रोजगारदाता( पोलिसीधनी सरह) र हामीबीच गरिएको सहमति हो । तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई तपाईंको ग्रुप पोलिसीको बारेमा सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यदि तपाईंले तपाईंको ग्रुप पोलिसीले तपाईंको आवश्यकता अनुसारको परिस्थितिलाई कभर गरेको छैन भन्ने लाग्छ भनें तपाईंले हामीसँग व्यक्तिगत पोलिसीको बारेमा कुरा गर्न सक्नु हुन्छ, जसमा तपाईंले चाहनु भएको अतिरिक्त लाभ पाइन्छ । यदि तपाईं तपाईंको ग्रुप कभरलाई कुनचाहिं व्यक्तिगत कभर राम्रो उपहार हुन्छ भन्ने बारेमा हामीसँग छलफल गर्न चाहनु हुन्छ भनें सजिलो छ, यहाँ क्लिक गरेर अनुरोध फारम भर्नुहोस् र हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सलाहकारले तपाईंलाई कल गर्नेछ र यो गोप्य रहनुका साथै यसको लागि कुनै शुल्क पनि लाग्दैन ।
के म बीमको लागि योग्य छु ?
योग्यताका शर्तहरु तपाईंले किन्न चाहनु भएको पोलिसीको प्रकृति अनुसार भिन्न हुन सक्छ । शुरु गर्नलाई, तपाईंले हाम्रो उत्पादन सेक्सनमा गई हामीकहाँ उपलब्ध विविध उत्पादनका शृँखलाहरु र ती प्रत्येकका लागि निर्धारित योग्यताको शर्त अवलोकन गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । तत्पश्चात्, तपाईंले हाम्रो एकजना प्रोफेसनल सल्लाहकारसँग सम्पर्क राखेर तपाईंको निश्चित् आवश्यकताहरु पूरा गर्ने कुनै योजनाका बारेमा विचार विमर्श गर्न सक्नु हुन्छ । सबैभन्दा छिटो माध्यम सल्लाहकारसँग भेट गर्ने भनेको यहाँ क्लिक गरेर संक्षिप्त फारम भर्ने हो र हामी तपाईंलाई तपाईंको अनुकूल समयमा कल गर्नेछौंं ।
के मैले बीमा खर्च भर्न सक्छु ?
म बीमा खरी दगर्न इच्छुक छु तर के म यसको खर्च भर्न सक्छु ?
यदि तपाईं बीमाको लागतलाई लिएर चिन्ति हुनु हुन्छ भनें त्योभन्दा यदि तपाईंसँग यो भएन भनें पछि के हुन सक्छ भन्ने बारेमा विचार गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि तपाईं कामगर्न असमर्थ हुनु भएमा तपाईंको परिवारको लागि कसले हेरविचार गर्ला ? के धितोवापत्को ऋण निरन्तर तिर्न सकिएला ? के तपाईंका सन्ततिहरुको स्कूल फिको खर्च कभर गर्न सकिएला ? तपाईंले बीमाका धेरै तहहरुमध्येबाट रोज्न पाउनु हुन्छ र सधैं नै तपाईंलाई तपाईंले जति सक्नु हुन्छ अहिले त्यसैबाट प्रारम्भ गर्ने विकल्पहरु रहन्छन् अनि जब तपाईंले आफू सक्छु भन्ने सोच्नु हुन्छ तब फेरि तपाईंको संरक्षणलाई वृद्धि गर्ने अवसर रहीरहन्छ । यो भनेको तपाईंको सम्पूर्ण आम्दानीलाई यसकै एक सानो हिस्साका साथ संरक्षित गरिए सरह हो । एकजना हाम्रो प्रोफेसनल बीमा सल्लाहकारसँग कुरा गर्नु भएमा तपाईंका आवश्यकताहरु के हुन सक्छन् भनेर स्पष्ट धारणा दिन सक्दछ। तपाईंले आफ्नो उपयुक्त समयमा तिनीहरुमध्ये कोही एकजनाबाट कल गराउन आग्रह गर्न सक्नु हुन्छ र सजिलोसँग यहाँ क्लिक गरेर फारम भर्नुहोस्, त्यो पनि निःशुल्क । हामी सदैव तपाईंको सहयोग गर्न तत्पर छौं ।
मेटलाइफको कुनै कार्यालय म बसेको स्थान नजिकै छ कि ?
हाम्रा कार्यालयहरु र व्यक्तिगत सल्लाहकारहरु (एजेन्टहरु) नेपालभरी नै रहेका छन्, तपाईं आफ्नो नजिकको लागि यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ ।
मेटलाइफ व्यक्तिगत सल्लाहकारहरु (एजेन्टहरु) चयन गर्ने र प्रशिक्षण दिने प्रक्रिया के छ ?
हाम्रा सल्लाहकारहरुको चयन अत्यन्त सावधानीका साथ उनीहरुको प्रोफेसनल विज्ञता एवं जीवन बीमाका समग्र पक्षहरुमा तिन्को ज्ञानको आधारम ागर्ने गरिन्छ ताकि ग्राहकका बीमा आवश्यकताहरुको विविध तहलाई पूरा गराउन उनीहरु सक्षम होऊन् । उनीहरु सबैजनालाई हामीबाट प्रदत्त सेवाहरु र त्यसले ग्राहकहरुलाई प्राप्त हुने लाभहरुका बारेमा अद्यावधिक गराइ राख्न नियमित रुपमा समग्र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर तपाईंले हाम्रो प्रशिक्षणका बारेमा थप जानकारी हासिल गर्न सक्नु हुन्छ ।
म मेटलाइफको कुनै एक उत्पादन खरीद गर्न इच्छुक छु, मैले के गर्नु पर्छ ?
हाम्रो प्रयोग–मैत्री वेबसाइटमा गएर तपाईंले हामलिे उपलब्ध गराएका जीवन, दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमाका उत्पादनहरुका बारेमा सरसर्ती जानकारी लिन सक्नु हुनेछ । तपाईंले हरेक उत्पादनको संक्षिप्त अवलोकनका साथै त्यसका यथार्थ शर्तहरु र त्यसबाट तपाईंलाई मिल्न सक्ने लाभहरुका बारेमा थप विस्तृत जानकारी पाउनु हुनेछ । यसैगरी तपाईंको जीवन परिस्थितिसँग कुनचाहिं उत्पादन मेल खान्छ भनेर निर्णय लिन सहज गराउन त्यहाँ केही दृश्यहरुको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । यसपछि, तपाईंलाई कुन कभर चाहिन्छ भन्ने बारेमा परामर्श गर्न सबैभन्दा सजिलो माध्यम हाम्रो एकजना योग्य, अनुभवी सल्लाहकारसँग भेट गर्ने नै हो । तपाईंले यहाँ क्लिक गरेर संक्षिप्त फारम भर्न सक्नु हुन्छ र एकजना सल्लाहकारले तपाईंसँग सम्पर्क गरेर तपाईंका विकल्पहरुका बारेमा थप छलफल गर्नुका साथै योजनाका शर्तहरुका बारेमा सविस्तार बताउनेछ ।
मैले मेरो पोलिसी कसरी व्यवस्था गर्नु पर्छ ?
के मैले मेरो कभरेज घटाउन सक्छु ?
तपाईंले तपाईंको पोलिसी शर्तहरु र बन्देजहरुको अधिनमा रहेर तपाईले गर्नुभएको कभरको रकम घटाउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंसँग तपाईंको पोलिसी कागजात साथमै छ भनें त्यसलाई तपाईंले औंल्याउन सक्नु हुन्छ । विकल्पमा, तपाईंले हाम्रो ‘हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं’ भन्ने सेक्सनमा गएर त्यस सम्बन्धी उचित फारम डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ ।( ‘हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं लिन्क’ गर्नुहोस्)
मैले मेरो व्यक्तिगत विवरणहरु कसरी अद्यावधिक गर्नु पर्छ ?
अति नै सजिलो र छिटो तवरले तपाईंका विवरणहरु अद्यावधिक हुन्छ । साथै यो पनि महत्वपूर्ण छ कि जब तपाईको विवरण केही परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई सच्चाउनु पर्दछ, जसले गर्दा तपाईंको पोलिसी अद्यावधिक रहीरहन्छ । तपाईंले डाउनलोड गर्न सक्नु हुन्छ र यहाँबाट व्यक्तिगत विवरणहरु परिवर्तन प्रिन्ट निकाल्नुहोस् ( ‘हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं लिन्क’ गर्नुहोस्) र यसलाई सूचीमा देखाइएको ठेगानामा प्रेषित गर्नुहोस् । तपाईंको पोलिसी नम्बर उल्लेख गर्न कहिल्यै नभुल्नुहोला ।
मैले मेरो प्रिमियमको किस्ता कसरी बुझनउनु पर्छ ?
तपाईंको पोलिसीको प्रकृतिमा यो निभर रहन्छ, तपाईंले आफ्नो प्रिमियम मासिक, त्रैमासिक,अर्ध–वार्षिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउन सक्नु हुन्छ । केही पोलिसीहरुका लागि चाहिं एकपटक भुक्तान गरे पुग्ने हुन्छ, जसलाई एकल प्रिमियम भुक्तानी भनिन्छ । तपाईंले आफ्नो परिस्थति र बजेट मेल खाने गरी प्रिमियम बुझाउने अवधि तय गर्न सक्नु हुन्छ ।
के मैले प्रिमियम तिरेको कुनै प्रमाण पाउँछु ?
हजुर । तपाईंको अभिलेखको लागि प्रिमियम तिर्नु भएको मितिमा प्रमाण स्वरुप जम्मा भपाईं रसिद पाउनु हुनेछ ।
कैले मेरो पोलिसीको सम्बन्धमा कहिले कहिले समीक्षा गर्नु पर्छ ?
यस्तो समीक्षा तपाईंले कम्तीमा वर्षको एकपटक गर्नु भयो भनें उचित हुन्छ । तपाईंको जीवनमा परिवर्तनहरु छिटो छिटो भैरहेका छन्, जस्तैः विवाह हुँदै गरेको, घर सर्न लागेको, तपाईंको व्यापार व्यवसायको विस्तार आदि, त्यस्तो बेलामा तपाईंले पटक पटक समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । वास्तवमा, तपाईंको जीवनमा विवाह हुन गैरहेको छ वा बच्चाको आगमन हुँदैछ भनें, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो नयाँ परिस्थितिलाई समेत कभर गर्ने गरी बीमा भएको सुनिश्चित् गर्नु अझ जरुरी रहन्छ । तपार्इंले अझै पर्याप्त कभर प्राप्त गर्नु भए नभएको बारेमा यकिन गर्ने सजिलो तरिका भनेको तपाईंको मेटलाइफ एलिको व्यक्तिगत सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नु नै हो । तिन्ले तपाईंसँग केही जिज्ञासाहरु राख्नेछन्, जसबाट तपाईंका आवश्यकताहरु निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
मैले दावी कसरी गर्नु पर्छ ?
तपाईंले दावी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरुका बारेमा जानकारी यहाँ (दावी सेक्सनमा लिन्क गरेर) बाट पाउनु हुनेछ । हामीले सम्भवभएसम्म प्रक्रियालाई सजिलो र छिटोछरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं । तथापि, पोलिसीहरु पिच्छे प्रक्रिया र कागजात फरक फरक आवश्यक पर्न सक्दछ, यसैले सही पोलिसीको लागि सही प्रक्रिया अपनाउनु भएको छ, छैन राम्ररी जाँच गर्नुहोस् । यदि तपाईंसँग तपाईंको दावी वा प्रक्रियालाई लिएर कुनै जिज्ञासा छ भनें कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरुमध्ये कोही एकलाई कल गर्न नहिच्किचाउनु होला ।
के मेरो दावी पेश गर्र्ने कुनै समय सीमा निर्धारण गरिएको छ ?
तपाईंको दावीको कारवाही प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो अघि बढेको सुनिश्चित् गर्न, हामी तपाईंलाई वा तपाईंको कोही प्रतिनिधिलाई तपाईंले पेश गर्नु भएको दावी घटना घटेको मितिले १० दिनभित्र पेश गर्नु भएको हो कि होइन भनेर हामीलाई जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं । हामीले कारवाही प्रक्रियालाई सम्भवभएसम्म छिटोछरितो बनाउने कोशिस गरेका छौं, यसैले तपाईंले हामीलाई पत्र, फ्याक्स,कल वा इमेल मार्फत् सूचित गर्न सक्न हुन्छ । हाम्रो दावी सेक्सन (लिन्क) मा दिइएको दावी प्रक्रिया सम्बन्धी एक एक निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस् । कृपया, तपाईंको तोकिएको पोलिसि सम्बद्ध प्रक्रियाको जाँच गरिएको यकिन गर्नुहोस् किनभनें प्रक्रिया र कागजात अलग अलग आवश्यक हुन सक्छन् ।
के एउटै दावी फारममा एकभन्दा बढी स्वास्थ्इ समस्याहरुको मेडिकल लागत खर्चहरु समाविष्ट गर्न सम्भव छ ?
हजुर । यदि तपाईंलाई सही लाग्छ भनें त्यसरी पेश गर्न पनि सकिन्छ । तर यो यकिन गर्नु पर्छ कि जब तपाईंले आफ्नो दावी फाइल गर्नु हुन्छ, तपाईंले सम्पूर्ण लागत खर्चहरुका लागि आवश्यक विवरणहरु उपलब्ध गराउनु भएको छ र हाम्रो दावी सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीले तपाईंको फारम प्रक्रियामा अघि बढाई रहँदा दुरुस्त निस्सा प्राप्त भएको सुनिश्चित् गर्न सक्नेछन् ।
कर्मचारी लाभहरु–ग्रुप बीमा
ग्रुप बीमा भनेको के हो र किन ?
ग्रुप बीमा योजना भनेको एउटै बीमा सम्झौताको मातहतमा रहने गरी व्यक्तिहरुको सामूहिक बीमा गरिनु हो र ग्रुपका प्रत्येक सदस्यले एकजना व्यक्तिले निजी तवरमा बीमा गर्दा बुझाउनु पर्ने प्रिमियम दरको तुलनामा कम प्रिमियम तिरेरै सम्पूर्ण फाइदा लिन सक्छन् ।
ग्रुप बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम दर कति छ ?
यस्तो प्रिमियम ग्रुपमा रहेका सबै कामदारहरुको बीमा रकमका साथै पेशा र उमेरको आधारमा निर्धारण हुनेछ । लाभ र प्रिमियमको विवरणसहितको प्रस्ताव तपार्इंले तपाईंका कर्मचारीहरुको विवरण हामी समक्ष पेश गर्नु भएपछि उपलब्ध गराउनेछौं ।
किन एकजना कर्मचारीले ग्रुप बीमा खरी द गर्नु पर्दछ ?
कर्मचारीहरु र तिन्का परिवारहरुले आर्थिक रुपमा सुरक्षित रहेको महसुस गर्न ।
यसले कर्मचारीहरुलाई उनीहरु काम गर्ने संस्थाप्रतिको वफदारिता वृद्धि गराउँछ, जसले गर्दा प्रतिफलमा कर्मचारीहरुको मनोबल वृद्धि भई उच्च कार्य सम्पादन प्राप्त हुन्छ ।
यसले रोजगारदातालाई कथंकदाचित कर्मचारीहरुको मृत्यु, अपा·ता, चोटपटक वा वीमारी जस्ता अकल्पनीय घटना भैहालेमा त्यसको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नबाट सुरक्षित राख्दै सुरक्षागार्डको काम गर्दछ ।
ग्रुप बीमाको प्रिमियम दर न्यून छ ।
यसले संस्थाहरुलाई भविष्यका लागि उचित ढँगले बजेट र योजना निर्माण गर्न समर्थ बनाउँछ ।
यो योजनामा सरिक हुन को को योग्य हुन्छन् ?
रोजगारीमा राखिएको छै यो योजना १० वा सोभन्दा बढी (साना मझौला व्यवसायहरुका लागि ५ वा सोभन्दा बढी) को ग्रुप, जो ६५ वर्षभन्दा कम उमेरका, हप्ताको कम्तीमा ३० घण्टा काम गरिरहेका, रोजगारदाताको नेपाल स्थित कार्यालयमा तलबी र काममा सक्रिय पूर्णकालिन नियमित कर्मचारीहरु, पोलिसी लागू हुने मितिमा सेवामै रहेकाहरु योग्य मानिनेछन् । यसले रोजगारतासँग पूर्णकालिन समय काम गर्ने क्रियाशील कर्मचारी, र जो अपा·ता, अनुपस्थितिको छुट्टि लिन पाउने, अस्थायी तवरमा हटाइएको, अथवा पार्ट–टाइम न भन्ने बुझाउँछ । रोजगारदाताले आफ्नो कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण मेटलाइफ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । कर्मचारीहरको कभरेजको थालनी मेटलाइफको लिखित स्वीकृतीमा निहित रहनेछ ।
कस्तो प्रकृतिको ग्रुपहरुले कर्मचारी लाभ योजना खरीद गर्न सक्नेछन् ?
ग्रुप बीमा कभरेजको लागि योग्य हुनलाई, त्यस्तो ग्रुप कर्मचारी–रोजगारदाता ग्रुप हुनु अनिवार्य छ र ग्रुपको निर्माण बीमाको लागिमात्र नभई अन्य प्रयोजनार्थ औपचारिक रुपमा गरिएको हनु पर्दछ ।
के हामीले प्रिमियम योगदानको आधारमा ग्रुप बीमा कभरेज लिन सक्छौं ?
सकिन्छ । यदि बीमित ग्रुप सदस्यहरुले कभरेजको लागि प्रिमियमको कुनै पनि अँश योगदान नगरी रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण प्रिमियम चुक्ता गर्दछ भनें त्यस्तो ग्रुप पोलिसी शुन्य–योगदानमय योजना हुनेछ । यदि ग्रुप सदस्यहरुले केही वा प्रिमियमको सम्पूर्ण हिस्सामा योगदान दिएर ग्रुप बीमा पोलिसी कभर गरेका छन् भनें त्यस्तो ग्रुप पोलिसी योगदानमय योजना हुनेछ । योगदानमय योजनाका लागि सहभागी सदस्यहरुले ग्रुपको कूल योग्य सदस्यहरुको कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनै पर्दछ ।
यदि एकजना बीमित कर्मचारीले अवकाश वा बर्खास्तगीको कारण संस्था त्यागेमा के हुन्छ ?
त्यस्तो अवस्थामा ग्रुप सदस्यले संस्था त्यग गरेकै मितिबाट उसको÷उनको कभरेज पनि स्वतः हट्नेछ । यसरी प्रयोग नभएको रोजगारदाताको सिफारिस बमोजिम प्रिमियम फिर्ता गरिनेछ वा नयाँ नियुक्त कर्मचारीको लागि तिरिने प्रिमियमको बदलामा वा अर्को पटकको प्रिमियम नवीकरण गर्दा पछिल्लो कायम दरको आधारमा समायोजित गरिनेछ ।
यदि नयाँ कर्मचारी संस्थासँग आबद्ध भएमा के हुन्छ ?
त्यस्तो कर्मचारीको कभरेज मेटलाइफद्वारा स्वीकारिएको शुरु मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । हामी पोलिसीको वार्षिकोत्सव वा बाँकी रहेको नवीकरण मितिसम्मको लागि पछिल्लो कायम दरमात्र शुल्क लगाउनेछौं ।यदि कुनै प्रिमियम प्रयोग नभएको उपलब्ध भएमा त्यस्तो रकम नयाँ कर्मचारीहरुको लागि प्रिमियममा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
क्े हामी काममा छँदा, घरमा हुँदा अथवा छुट्टिमा र भ्रमणमा रहँदा कभर भैरहेका हुन्छौं ?
हो । यास योजनाले दिनको २४ सै घण्टा र वर्षको ३६५ दिन नै विश्वव्यापी संरक्षण प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
कभरेज रकम कसरी निर्धारण गरिन्छ ?
देहायका ३ तरिकाहरुमध्ये कुनै एक तरिकाले प्रत्येक सदस्यको कभरेज रकम निर्धारण गरिन्छ ।
● एकसमान रकम योजनाः बीमाको रकम सबै योग्य कर्मचारीहरुको लागि बराबर हुनेछ ।
● आम्दानी योजनाको गुणा गरेरः बीमाको रकम कर्मचारीहरुको आम्दानी गुणा गरेर निर्धारण गरिनेछ– यो मासिक एकमुष्ठ वा शुरु तलबको १२/२४/३६/४८ गुना हुन सक्छ।
श्रेणी योजनाः बीमाको रकम पेशा वा पद वा तलब स्केलको वर्गीकरण अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ ।
के हामीले ऐच्छिकताको आधारमा रहेर हाम्रो इच्छा अनुसार कुनै निश्चित् कभरेजमात्र लिन सक्छौं?
सक्नु हुन्छ । हामी तपाईंको संस्थाको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर कभरेज प्याकेजलाई छुट्याउन सक्छौं । तथापि, जीवन र दुर्घटनाजन्य मृत्यु कभरेज अन्य कभरेजको लागि अनिवार्य छ ।
हामीले दावी कसरी पेश गर्नु पर्छ ?
तपाईंले सहयोगका लागि हाम्रो कार्यालयमा कल गर्न सक्नु हुन्छ ।हाम्रा मैत्रीपूर्ण प्रतिनिधिहरुले दावी प्रक्रियामा तपाईंलाई निर्देश गर्नेछन् ।
कल गर्नः +९७७ १ ५५५५१६६ वा
तपाईको प्रश्न लेखेर फ्याक्स गर्नः +९७७ १ ५५५५१७३
अथवा इमेल गर्न service-nepal@metlife.com.np